Sida loo soo celiyo koontada Clash Royale | Madasha Mobile -ka
Sida loo soo celiyo koontada Clash Royale
Cristian Garcia | 23/09/2021 09:51 | Ciyaaraha
Clash Royale wuxuu ahaa ciyaar fiidyow aad u guulaystay oo leh xiddig weyn oo firfircoon tan iyo 2016. Taasi waa sababta haddii aad u huray saacado badan - iyo lacag - ciyaarta fiidiyaha, ma doonaysid inaad lumiso koontadaada xaalad kasta. Xitaa haddii aadan xitaa dheelin muddo dheer. Taasi waa sababta ay u badan tahay in haddii aad dhibaato ku qabto aad rabto inaad ogaato sida loo soo celiyo akoonka Clash Royale. Ha ka welwelin hana ka xishoon tan iyo markii ay dhammaanteen nagu soo dhacday marba marka ka dambaysa waana wax iska caadi ah inaad rabto inaad ka bogsato.
Mararka qaarkood waxaan xitaa helnaa badhan khaldan oo waxaad gacmahaaga saari kartaa madaxaaga adigoo u malaynaya inaad gabi ahaanba lumisay horumarkaagii oo dhan, laakiin sidaas ma aha. Markaa haddii aad la yaabban tahay sida loo soo celiyo koontadaada Clash Royale, ha welwelin maxaa yeelay waa mawduuca ugu weyn ee aan wax ka qaban doonno. Ma doonayno in qofna ka maqnaado xisaabtiisa iyo taajkiisa. Dhammaanteen halkan ayaan ku ciyaarnay waana ognahay dadaalka ay u baahan tahay in la helo dejin wanaagsan oo lagu tartamo oo lagu fuulo jaranjarada.
Sida loo soo dejiyo BlueStacks 4 Ma nabad baa?
Ha welwelin maxaa yeelay nasiib wanaag aad bay u sahlan tahay inaad ka soo kabsato wax kasta oo aad ku lahayd koontadaada iyo koontadaada iyo in ka badan haddii ay tahay shil. Dadka Supercell, soosaarayaasha, waxay tixgeliyeen dhammaan dhacdooyinkan lama filaanka ah ee soo bixi kara sababtaas awgeedna waxaa jira habab wanaagsan oo aan hoos kuugu sheegi doonno waxaad ku samayn kartaa daqiiqado gudahood. Marka, aan halkaas tagno, waxaa jiri doona rabitaan ah inaan mar kale ciyaaro Clash Royale, sax?
1 Sidee loo soo celiyaa koontada Clash Royale?
1.1 Ma lumin karaa koontadayda dhaqdhaqaaq la'aan awgeed?
1.2 La xiriir Supercell websaydhka rasmiga ah
Sidee loo soo celiyaa koontada Clash Royale?
Si aad u soo ceshato koontadaada Clash Royale oo aad u noqoto mid aad u fudud, waxaan kugu wargalin doonaa haddii aad haysato ku xiran koontadaada kale ee Google Play Store, Xarunta Ciyaaraha ama Facebook. Haddii aysan sidaas ahayn, waxaan ku siin doonnaa tillaabooyin kale oo aad raacdo kuwa soo socda ka dib, maadaama maadaama aanan lahayn koontadaas oo xiriir la leh ama xiriir la leh, waa inaad la xiriirtaa soo -saareyaasha, SuperCell, si dib loogu dhiso koontada.
Haddii aad rabto inaad soo kabsato adigoon la xiriirin soo -saareyaasha, waa inaad raacdaa tallaabooyinka hoose:
Si aad u bilowdo, tag qaybta dejinta shaashadda ciyaarta fiidiyaha. Hadda dooro ikhtiyaarka Caawinaad iyo Gargaar. Dhexdeeda waxaad ka heli doontaa jaangooyooyinka shaashadda ciyaarta lafteeda, halkaas si aad naftaada u hesho waxaad yeelan doontaa dhammaan koobabkii xisaabtaada. Hadda goobaha gudahood waa inaad fiirisaa xagga hoose waxaadna heli doontaa caawimaad iyo caawimaad mar kale.
Ma heshay? Hagaag hadda nala soo xiriir Waxaad ka heli doontaa daaqadda sare ee aad ku jirto Haddii aad dhib la'aan ku heshay, ikhtiyaar kale ayaa soo bixi doona, kaas oo ah "Koontada Lost" ama haddii ay ku soo baxdo Ingiriis "Lost Account". Dooro ikhtiyaarka koowaad oo hadda ku dhex jira, ka jawaab maya su'aasha haddii ay ku caawisay. Sidan ayaad ku heli doontaa foomka xiriirka ee SuperCell na siiso. Hadda waa inaad buuxisaa faahfaahintaada iyo kiiskaaga. Waad la soo xiriiri doontaa iyaga oo nasiib wanaag adiga iyo rabitaankaaga inaad ciyaarto, dadka ka socda shirkadda soo -saaraha ayaa sida ugu dhaqsaha badan uga jawaaba.
Sida loo soo dejiyo Clash Royale ee PC gebi ahaanba bilaash
Waxaan kugula talineynaa inaad tilmaamto xogta noocaaga magaca isticmaalaha, qabiilkaaga, heerka xisaabtaada saxda ah, koobab, iyo tafaasiil kasta oo dheeri ah oo aad siin karto taas oo ka dhigaysa inay u arkaan inaad adigu tahay milkiilaha koontadaas. Markaa shaki kuma jiro.
Sida caadiga ah, dadka Supercell ma guuldaraystaan ​​waxaanan kuu xaqiijineynaa inay sida caadiga ah haystaan ​​koox caawimaad iyo taageero oo aad u dhakhso badan oo wax ku ool ah. Waa run in ay yeelan karaan shaqo heerkeedu sarreeyo iyo in ay qaataan waxoogaa ka dheer intii caadiga ahayd laakiin ha ka nixin in goor dhow ama goor dambe ay ku jawaabi doonaan. Haddii aysan waxba dhicin maalmo gudahood waxaad mar kale tuuraysaa dawacooyin. Ha ka welwelin. Iyada oo tan aan horeba uga jawaabi lahayn su'aasha ku saabsan sida loo soo ceshado koontada Clash Royale. Laakiin haddii ay dhacdo inaan aragno meel kale oo aan kala xiriiri karno Supercell.
Ma lumin karaa koontadayda dhaqdhaqaaq la'aan awgeed?
Mabda 'ahaan Supercell waxay taas xaqiijinayaan suurtogal ma aha in luminta akoonku ay sabab u ahayd dhaqdhaqaaq la’aan. Markaa haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid arrintaas, waa la xaliyay. Muddada dheer ee aad joojiso ciyaarta fiidiyowga Clash Royale, weligaa xisaabtaada kuma lumin doontid sababtaas awgeed. Looma baahna in la walwalo. Koontadaadu had iyo jeer waxay ku xirnaan doontaa akoonno kale sida Google Play Store, Facebook ama kuwa kale ee aan ku soo sheegnay cutubyadii hore. Waxaad mar walba awoodi doontaa inaad dib u hesho adigoo la xiriiraya Supercell. Markaa haddii aad la yaabanayd sida loo soo ceshado koontada Clash Royale adiga oo u malaynaya in aad u luntay dhaqdhaqaaq la'aan awgeed, waa khalad.
Waxaan arki doonnaa habka ugu dambeeya ee aan kula xiriiri karno dadka Supercell haddii aan kor ku soo caawin.
La xiriir Supercell websaydhka rasmiga ah
Sidii aan nidhi, waxaa jira hab kale oo lagula xiriiro adeegga rasmiga ah ama taageero farsamo si aad si dhakhso leh ugu soo ceshato koontadaada Clash Royale. Haddii aad dhex gasho degelka rasmiga ah ee Clash Royale waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa dhowr tallaabo. Waa inaad mar kale buuxisaa foom sida kii hore oo kale ah. Foomkan waa inaad doorataa dhinacyo sida ciyaarta, luqadda aad ku ciyaarto, qaybta (halkaas waxaad ku tilmaami doontaa inaad lumisay koontadaada), qor magacaaga / akoonkaaga si sax ah oo sax ah iyo cinwaanka iimaylka si ay kula soo xiriiraan. Habkaas ayaad kula xiriiri kartaa Supercell si aad u soo ceshato koontadaada.
Sida loo soo dejisto loona rakibo Brawl Stars PC
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid ciyaarta fiidiyaha, waxaad sidoo kale ka faa'iideysan kartaa qaybtaas websaydhka rasmiga ah. Maadaama ay leeyihiin qayb la yiraahdo gargaar taas oo aad wax walba kaga faaloon kartid. Waa shaqadooda waxayna kuugu soo xaadiri doonaan sida ugu dhakhsaha badan. Waxaad ka heli doontaa xagga hoose, dhinaca bidix Wax khasaare ah ma laha.
Ah haa, halkaas waxaad sidoo kale ku xallin kartaa ku dhawaad ​​dhibaato kasta oo ciyaarta ku haysata. Laga soo bilaabo iibsashada biilka oo guuldaraysatay ilaa wax kasta oo kale. Waxaad jawaabo u heli kartaa dhibaatooyin badan ama su'aalo ka soo baxa ciyaarta fiidiyowga Clash Royale iyo koontadaada.
Hadda waad taqaanaa sida loo soo ceshado koontada Clash Royale iyada oo aan wax dhibaato ah. Waxaan rajaynaynaa in maqaalkani ku anfacay adiga iyo wixii hadda ka dambeeya ha ka baqin inaad lumiso koonto, in wax walba xal u leeyihiin noloshaan. Ka tag faallooyinka haddii ay xaliyeen dhibka iyo intee ayay qaadatay inay kula soo xiriiraan?. Markaa waxaan arki karnaa sida ay waxtar ugu leeyihiin dhibaatooyinka xallinta Supercell.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Ciyaaraha » Sida loo soo celiyo koontada Clash Royale
Sida loo helo dhibcaha Habbo oo bilaash ah
Sida loo waco lambarka taleefanka ee i xanibay